Bulshada Bariga Afrika oo bilawday olole cusub oo dalxiiska gobolka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Bulshada Bariga Afrika oo bilawday olole cusub oo dalxiiska gobolka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Wakhtiga waarta • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Bulshada Bariga Afrika ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq dalxiis oo ka socda gobolka
Ololahan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo saddex toddobaad ah, laga bilaabo Diisambar 1, 2021. Waa qayb ka mid ah hirgelinta Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Dalxiiska ee EAC iyo Qorshaha Soo kabashada EAC ee ay taageerto Wakaaladda Horumarinta Jarmalka, GIZ.
The Bulshada Bariga Afrika (EAC) ayaa bilaabay Ololaha Warbahinta Dalxiiska ee Gobolka iyo EAC oo loo dejiyay in lagu xayeysiiyo goobaha dalxiiska ee heer qaran iyo heer gobol iyo adeegyo, iyada oo ujeedadu tahay in la kiciyo oo la horumariyo socdaalka gobolka.
La bilaabay usbuucan, ololaha "Tembea Nyumbani", ama "Booqashada Guriga" ayaa doonaya in uu soo jiito muwaadiniinta Bariga Afrika si ay ugu safraan dalalkooda, ka dibna gobolka, si ay u soo nooleeyaan dalxiiska gudaha iyo gobolka ee gobolka Bariga Afrika, iyada oo ay jirto faafitaanka COVID-19.
Ololuhu waxa uu socon doonaa muddo saddex toddobaad ah, laga bilaabo Diisambar 1, 2021. Waa qayb ka mid ah hirgelinta Istaraatiijiyada Suuqgeynta Dalxiiska ee EAC iyo Qorshaha Soo kabashada EAC ee ay taageerto. Wakaaladda Horumarinta Jarmalka, GIZ.
EAC Xoghaynta ayaa ololahan ka bilowday xarunteeda waqooyiga Tansaaniya ee dalxiiska ee Arusha.
Dalxiiska ayaa si weyn uga qaybqaata dhaqaalaha wadamada EAC Partner States iyo ka hor cudurka faafa, wuxuu ka qayb qaatay 10 boqolkiiba wax soo saarka gudaha (GDP), 17% dakhliga dhoofinta iyo 7% shaqo abuurka.
Faafida COVID-19 waxay aragtay in qaybta ay si xun u saamaysay dalxiisayaasha caalamiga ah ee imanaya Bariga Afrika hoos u dhac ku yimid 67.7%, ilaa 2.25 milyan oo soo galooti ah sanadka 2020 marka la barbar dhigo 6.98 milyan sanadka 2019.
EAC Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Dr. Peter Mathuki ayaa ku dhiiri galiyay dalxiisayaasha waaxyaha gaarka loo leeyahay inay u fidiyaan baakado la awoodi karo dadka Bariga Afrika si ay ugu soo jiitaan inay ka faa'iidaystaan ​​fasaxyada fasaxa ee la heli karo inta lagu jiro xilliga ciidaha ee soo socda.
"Iyadoo la eegayo khidmadaha gelitaanka doorbidida iyo qiimayaasha hadda la kordhiyey muwaadiniinta EAC, waa wakhti ay dadka Bariga Afrika ku nool yihiin inay sahamiyaan dhaqamada kala duwan, ay qaataan safari tacabur ah oo ay booqdaan xeebaha qalaad iyo fursadaha kale ee uu gobolku bixiyo," Dr. Mathuki ayaa yidhi intii lagu jiray warbaahinta. daahfurka lagu qabtay xarunta EAC ee Arusha bartamihii toddobaadkan.
Dr. Mathuki oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay EAC waxay samaysay EAC Pass kaa soo isku xidha oo ansixiya imtixaanada COVID-19 iyo shahaadooyinka tallaalka ee Dawladaha Iskaashiga EAC si loo fududeeyo socdaalka gobolka oo dhan.
Ololaha Tembea Nyumbani waxaa fulinaya EAC iyada oo la kaashanaysa Platform-ka Dalxiiska ee Bariga Afrika oo matala ganacsiyada dalxiiska ee gobolka oo dhan.
Ololaha dhexdiisa, milkiilayaasha hoteellada iyo bixiyeyaasha kale ee adeegga dalxiiska ayaa lagu dhiirigelinayaa inay kor u qaadaan xirmooyinka la awoodi karo ee muwaadiniinta EAC.
Dhankiisa, Agaasimaha EAC ee u qaabilsan Qaybaha Waxsoosaarka, Mr. Jean Baptiste Havugimana ayaa xusay in EAC ay samaynayso horumarro lagu xaqiijinayo in Dal-ku-galka Dalxiisayaasha ah ay qaataan dhammaan Waddamada Iskaashiga EAC.
“Golaha Waaxda Dalxiiska iyo Maareynta Duurjoogta intii lagu jiray shirkoodii aan caadiga ahayn ee la qabtay bishii Luulyo ee sanadkan waxay ku taliyeen in Xoghayntu ay qabato shir dhinacyo badan leh oo ka kooban qaybaha muhiimka ah sida Dalxiiska iyo Duurjoogta, Socdaalka iyo Amniga si loo horumariyo hannaan lagu soo bandhigo Dalxiis keli ah oo dal-ku-socod ah oo ay leeyihiin dhammaan Waddamada Iskaashiga,” ayuu yidhi.
Mr. Havugimana ayaa xusay in kulanka la qaban doono horraanta sanadka 2022-ka, isagoo intaa ku daray in marka si buuxda loo qaato fiisaha ay fududeyn doonto socdaalka dalxiisayaasha ajnabiga ah ee gobolka oo dhan.
Intaa waxaa dheer, Madaxa Dalxiiska ee EAC, Mr. Simon Kiarie, ayaa xusay in EAC ay mashaariicda dadaalka dalxiiska ee heer gobol iyo heer qaranba; gobolku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu helo ilaa 4 milyan oo dalxiis ah sanadka soo socda.
"Dib u soo kabashada waaxda dalxiisku waxa ay ku socotaa meel sare waxaanan filaynaa sanadka 2024, in aan heli doono ilaa 7 milyan oo dalxiisayaal ah marka la barbar dhigo 2.25 milyan oo dalxiisayaal ah oo la diiwaan galiyay sanadka 2020," ayuu xusay.